घर युरोपियन स्टार टिमो वार्नर बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
एलबीले पूर्ण स्टोरीको एक जर्मन फुटबल प्रतिभा प्रस्तुत गर्दछ जुन उपनामद्वारा चिनिन्छ; "टर्बो टाइमो"। हाम्रो तिमो वार्नर बचपन स्टोरी प्लस अनलल्ड जीवनी तथ्यले तपाईंलाई बचाउनु पर्ने घटनाको पूर्ण खातालाई उनीहरूको बचपनको मिति सम्म ल्याउँछ। विश्लेषणमा प्रसिद्धि, पारिवारिक जीवन र धेरै अफ-पिच तथ्याङ्कहरू (उनको बारेमा धेरै चिन्ता) भन्दा पहिले आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ।
हो, सबैले आफ्नो गति र ऊर्जाको बारेमा खेलको क्षेत्रमा जान्दछन्। तथापि, केवल एक हात केही प्रशंसकहरू टिमो वार्नरको जैवको बारेमा धेरै जान्दछन् जो निकै रोचक छ। अब थप adieu बिना, सुरु गरौं।
टिमो वार्नर बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -बाल्यकाल
टिमो वेर्नर मार्च6को 1996th मा उनको आमा, सबिन वार्नर र बुबा, जर्मनी को स्टटगार्ट मा गुन्न्ट शेह लाई जन्म दिए। उनको चित्रबाट तल चित्रण गरिएको थियो, तिमोले जीन पोर्टलको साथ गहिरो जर्मन विरासत बाट यसको जर्नल जन्मेको थियो।
बढ्दो, त्यहाँ एक उच्च निश्चितता थियो कि फुटबल उनको बुलाउनेछ। चाँदीको कुरा, तिनको बुबा गुन्न्न्ट शूह पनि एक पेशेवर फुटबलर थिए जसले आफ्ना दिनहरूमा अग्रगामी खेलेका थिए।
यो नोट गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि तिमो असाधारण घरबाट धेरै विनम्र शुरुवात भएका थिए। बढ्दै गयो, तिनका आमाबाबुले उनलाई आवश्यक नैतिक मानहरू सिकाउनुभयो; (सबैको लागि सम्मान, उदार / सहयोगी हुनु, जिम्मेवारीको भावना हुनु, कसैलाई कहिल्यै हानि दिनु र साझेदारीको मूल्य कहिल्यै)। टिमो वार्नरले यसलाई राख्छ;
"म मेरो परिवार र साथीहरूसँग छु जब म टिमो वार्नर फुटबलर हुँ, म केवल तिमोलो, विनम्र छोरा, साथी ... बस सबैजना जस्तै एक जना मान्छे। यदि मैले केही गल्ती गरें भने मलाई डरलाग्दो छैन! "
उनको आमाबाबुले पृथ्वी तल र व्यावहारिक बनाउनुभएको थियो टिमो आफैलाई राम्रो र राम्रोसँग बनाइएको हुन्छ। त्यसोभए, उनी आफ्नो बुबा भन्दा बढी सफल-आधारित रूपमा देखाए। तिमो वार्नर एक पटक उनको बचपनका दिनहरुमा सम्झना गरे कि उनी कसरी आफ्नो पिता संग पहाडहरु लाई आफ्नो सहनशीलता र एथलेटिकवाद सुधार गर्न प्रयोग गरे। यो जोरदार रूपमा आफ्नो क्यारियरको निर्माणको रूपमा देखा पर्यो, उनको आमाबाबुले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराको रूपमा देखाएन। आफ्नो माम र बुबालाई, शिक्षा पहिला आफ्नो छोराको लागि आउँदछ।
टिमो वार्नर बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -क्यारियर बिल्डअप
बढ्दै गयो, तिमो एक ठूलो थियो मारियो गोमेज प्रशंसक। यस तथ्यसंग जोडिएको छ कि उनको बुबा पनि फुटबलर थिए, खेलमा उनको रुचि निश्चित थियो। एक साक्षात्कारमा, उहाँले एक पल्ट पट्टेको थियो कि पत्रकारहरु लाई भन्नुभयो मारियो गोमेज उनको कोठामा जब उनले 11-12 वर्ष पुरानो रूपमा चित्रण गरे।
धेरै युवा पेशेवर फुटबलरहरूको विपरीत, तिमोले आफ्नो हाई स्कूल पढे। यस अनुसार बूंदेस्लिगा आधिकारिक वेबसाइट। उनको आमाबाबु विशेष गरी साबिन वार्नर, (उनको आमा) आफ्नो छोरालाई विद्यालय शिक्षा समाप्त गर्न चाहन्थे (न्यूनतम, हाई स्कूल) एक पेशेवर फुटबलर हुनु अघि। त्यसपछि फेरि स्कूलमा, टिमो एक सामान्य र सुस्त विद्यार्थी थिएन, जसरी पनि उनीहरूको स्कूलको घण्टाको आधा गुमाउँथ्यो (फुटबल प्रतिबद्धताहरूको कारण) 2014 को उमेर मा 17 मा स्नातक गर्न सक्षम थियो।
टिमो वार्नर बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -सारांशमा क्यारियर
भित्री समयमा पनि, फुटबलको लागि तिमोको जुनूनले उनलाई स्थानीय युवा युवा समुहको रोस्टरमा भर्ना गर्यो TSV Steinhaldenfeld जसले उनलाई आफ्नो प्रतिभा को प्रदर्शन गर्न चरण दिए। क्लबले एक राम्रो काम गरे जुन युवा बालकको क्यारियर आधारको निर्माण गर्न आवश्यक छ जुन VfB स्टटगार्टको साथ युवा युवा चरणमा सजिलो पाईन्छ।
टिमले उच्च विद्यालयको अन्त्यमा VfB स्टटगार्टको लागि साइन इन गर्यो, फुटबलमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्नुअघि आफ्ना आमाबाबुको स्कूल जाने इच्छा राख्नु भयो।
VfB मा, उनको करियर एक मौसम विज्ञान र उहाँले आफूलाई सबै जवान रैंक्सहरू माथि बढ्दै गरेको देख्नुभयो जसलाई यसरी युरोपभरि ठूला क्लबहरूबाट रूचि राख्ने। यसले आफ्नो क्यारेक्टर वा क्यारियरलाई आफ्नो क्यारियरमा परिवर्तन गर्दैन।
2016 मा, Werner ले यो कदम सबै स्थानहरु बीच आरबी Leipzig मा बनायो। उनले आफ्नो नयाँ क्लबमा तत्काल प्रभाव पारेका थिए, उनको पहिलो सिजनको दौरान 21 म्याचहरूमा 31 पटक स्कोर गर्दै। जर्मन फुटबलमा उनको प्रभुत्वले उनको दोस्रो उपनामको नेतृत्व गर्यो; आरबी लेपिज्ग रकेट ईंन्धन। यो पछि जर्मन नेशनल टीमको कलद्वारा योचिम लोव.
विराटनगर, मारियो गोमेज जो एक पल्ट उनको नायक अब जर्मन राष्ट्रीय टीम मा एक प्रतियोगी को एक बन्यो।
सारांशमा, टिमो साँच्चै, जर्मनीको नयाँ सुनको उत्पादनको एक बोनस समूह हो। उहाँ बिना कुनै संदेह छ, सबैभन्दा ठूलो तूफान प्रतिभा मारियो गोमेज.
टिमो वार्नर बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -सम्बन्ध जीवन
आफ्नो सबै सफलता देखेर, यो तपाईं को लागि यो लेख को पाठक उत्सुक हुन को लागी साधारण छ कि तिमो डेटिङ जान्न जान्दछन्। सायद, टिमो खेलको पिचमा एक तारा हो। उनको खेलकुद क्षमता, साथसाथै पिचबाट उनको जीवनशैलीको बारेमा जान्न उनीहरूको पूर्ण चित्र निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ।
उनको खुलासा फोटोहरु को सही सौंदर्य दिखा रहेको छ, यो आरोप छ कि जूलिया मोडेल हो या शायद फिटनेस मोडेल हो।
तर हाम्रो दावी फिर्ता गर्न बलियो तथ्य बिना, धारणाहरूले खाली बिन्दुमा लक्ष्य पाउँछ। टिमोले आफ्नो प्रारम्भिक फुटबल क्यामेराबाट स्टटगार्ट आधारित फिटनेस मोडेल जूलिया नागलरलाई डेटिङ गरेको छ। उनीहरूको सम्बन्ध सबै भन्दा राम्रो साथीको स्थितिबाट बढ्यो र साँचो प्रेममा समाप्त भयो। दुबै प्रेमिका धेरै जवान छन्। टिमो उनको जूलिया नागलर भन्दा एक वर्षको उमेर हो जुन स्ट्रगर्टमा विश्वविद्यालयमा एक छात्र हो।
जूलिया जर्मनीमा सबैभन्दा सुन्दर केटी नहुन सक्छ तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा तिमोले उनको हृदयलाई दिएका छन्।
यस जोडीले उनीहरूको सम्बन्धलाई सम्बोधन गर्दै उनीहरूको सम्बन्धमा गोपनीयताको मार्ग रोजेका छन्। टिमो वार्नरको सोशल मिडियाको माध्यमबाट सर्फिंग गर्दा कुनै सम्बन्ध प्रदर्शित गरिएका पदहरू देखिन सकिँदैन तर लुकेको तथ्यसँग चल्दैन। धेरैले अनुमान लगाए कि टिमो एक्लै छ र जुलियासँग भत्किएको छ, तथापि, जोडिको प्रेम कथित रूपमा मीडियाको चमक पछि बलियो हुँदै जान्छ। एक पटक एक पटक आफ्नो ब्रेकअप को गपशप सुनने पछि, दुबै प्रेमियों को उनको फोटो साझा (को रूप मा तल देख्यो) महिलाहरु लाई डराने को डराने को लागि जूलिया को मान्छे सिंगल छ।
आफ्नो पृथ्वीदेखि जीवन र विनम्र शुरुआतको न्याय, यो पनि क्रिस्टल स्पष्ट छ कि जर्मन फुटबल अगाडी विगतका सम्झौताको रेकर्डबाट मुक्त छ।
ठीक छ, भले पनि यो सामाजिक मिडिया छैन, दम्पतीले सार्वजनिक उपस्थिति बनाउँदा प्यारी क्षणहरू साझेदारी गर्न मिल्दैन। 2017 मा, तिमो वार्नर र उनको प्रेमिका जूलियाले 2017 क्रिसमसका लागि रेड बुल एरेनाको वीआईपी क्षेत्रमा 600 क्रिसमस पार्टीको लागि आफ्नो प्रेम उपस्थिति बनायो, साथै बन्डेसलिङ्ग टोली र सबै कर्मचारीहरू सहित। तल प्यारी जोडाको तस्बिर हो।
तथापि, तिमो र उनको प्रेमिका जूलियाले उनीहरूको संलग्नता वा विवाह योजनाहरूको समाचार नराखेको छ, तर यो जस्तो देखिन्छ, दिन धेरै टाढा छैन। एकअर्कालाई प्रेममा धेरै तरिकाले न्याय गर्दै, यो विवाहित हुनु अघि समयको मात्र हो कि हैन. हो !! हामीले त्यो भने। उनीहरूले विवाहित हुन सक्दैनन् धेरै तिमो वार्नरको परिवारमा एक प्रवृतिको कारण हुनसक्छ जुन तल पारिवारिक जीवन धारामा उल्लेखित छ। यद्यपि, लाइभबगरले उनलाई उत्कृष्ट, औंला पार गरेको चाहनुहुन्छ!
टिमो वार्नर बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -पारिवारिक जीवन
आफ्नो परिवारको बारेमा थप तथ्यहरूसँग सुरू गर्दै, यो महत्त्वपूर्ण छ कि यो टाइमो वार्नर आमाबाबु हो अविवाहित. हामी यो कसरी थाहा पार्यो? सावधानीपूर्वक अनुसन्धान गरिसकेपछि हामीले तिमोलाई अझै पनि अज्ञात कारणहरूका कारण आफ्नो बुबाको सट्टाको अन्तिम नामको हेरचाह गर्दछौं। यद्यपि केही जर्मन वेबसाइटहरूले यस तथ्यलाई पुष्टि गरेका छन् कि उनको पिता र आमा आमाबाबु अविवाहित छन्।
यस लेखमा पहिले बताए अनुसार, तिमो आमाले नाम बन्छ Sabine Werner जबकि उनको बुबाले नाम दिन्छन् गुन्टेन शेह। यी तथ्याङ्कहरूको बावजूद, के यो महत्त्वपूर्ण तथ्य हो कि उनको परिवारले पृथ्वीमा विचार गरिरहेको छ र तिमोको यस्तो विनम्र घरबाट आउँदा खुशी छ।
टिमो वार्नर बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -सर्कल र ब्रेकिंग समस्या
2017 मा, इस्तांबुल, टर्कीमा वोडाफोन अरेनामा Besiktas को विरुद्ध मात्र RB Leipzig च्याम्पियन्स लीग खेलको 32 मिनेट पछि, एकपटक टिमो वेर्नर प्रतिस्थापन गरियो। यो थियो किनकी उनले श्वास प्रशंसकहरु को कारण एक सांस लेने र हावा परिसंचरण समस्या को विकास गरे। टर्कीको दुश्मन वातावरणले तिमोलाई बेवास्ता गर्यो। उनले पहिलो पटक आफ्नो गोलमा आफ्नो औंला चिपकाएर अचम्मको आवाज रोक्न खोज्दा उनीहरूको टोलीले उनीहरूलाई आक्रमण गर्न आवश्यक भए तापनि उनीहरूले गोल गरे।
शोर धेरै गहन र अनियन्त्रित थियो कि वर्नर दिइएको थियो earplugs उनको कोच द्वारा। समस्या जारी रह्यो, टिमोले 31 मिनेटमा च्याम्पियन्स लीग विस्फोटमा प्रतिस्थापन गर्न थाल्नुभयो, तर उनको पक्ष अझै पनि 1-0 तल थियो। यो जोर दिए पछि उसले क्षेत्र छोड्न चाहन्छ। म्याच पछि उनको प्रशिक्षकले भने।
"यो जस्तै वातावरण को लागि आफ्नो टीम तयार गर्न असंभव छ। त्यहाँ एक खरगोश शोर थियो जुन तिमो घृणा गर्दछ। "
तर उहाँले थप गर्नुभयो:
"मेरो लागि, कोच को रूप मा, यो महत्त्वपूर्ण छ कि म ती जस्तै क्षणहरुमा भरोसा गर्न सक्छु। जो आफैलाई रक्षा गर्न तयार छ, टर्कीको प्रशंसकहरूबाट शोर सामना। "
आरबी लेआईपीजीजी प्रबन्धक राल्फ हसनहेटलले पछि टाइमो वर्नरको चरित्रलाई प्रश्न गरे र बिक्किता विरुद्ध प्रतिस्थापित गर्न अनुरोध गरे।
टिमो वार्नर बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -गति तथ्य
Timo Werner ले 11.11 सेकेन्डमा 100 सेकेण्डमा एक पटक बन्द गरेको छ। यो उनी कसरी आफ्नो पहिलो उपनाम पाएको थियो; 'टर्बो टाइमो'जर्मन मिडियाले उनको ब्लिसिङ गतिको कारणले।
पिचमा उनको सामरिक प्रतिभासँग उनको गति युग्मितले उनलाई निम्नलिखित फिफा मूल्याङ्कन दिएको छ। आफ्नो उमेर संग युगल, त्यो फीफा gamers को लागि एक संभावित ट्राफिक लक्ष्य को रूप मा देखेको छ जो खेल मास्टर लीग।
त्यसपछि फिर्ता आफ्नो अन्तिम वर्ष विद्यालयमा, एक 17 वर्षको उमेरमा तिमो यो XVUMX मिटर भन्दा बढी ग्यारह भन्दा बढी सेकेण्डमा दौड्यो।
टिमो वार्नर बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -संयुक्त सपना
लेखनको समयमा, तिमो वार्नरले आरबी लेपिज्गसँग सम्झौता गरेका छन् जुन 2020 सम्मको अन्तिममा सेट गरिएको छ। तथापि, टिमोले प्रकट गरेको छ कि उनी प्रिमियर लिगमा पुग्ने सपना देख्छन् र त्यो विशेषतया शौक हो म्यान्चेस्टर युनाइटेड किनभने तिनीहरूको इतिहास र फिलोसोमा।
"हो, प्रीमियर लीगमा खेल्ने मेरो सपना हो। म दुई वा तीन क्लबहरूको लागि खेल्न चाहन्छु, र मैनचेस्टर युनाइटेड ती क्लबहरू मध्ये एक हो। तर शायद अर्को केहि वर्ष पछि - पछि, जब मेरो अंग्रेजी एकदम राम्रो छ! म आरबी लेपिज्ग मा धेरै सहज हुँ, यद्यपि, "
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो टाइमो वार्नर बचपन स्टोरी प्लस अनगिन्ड जीवनी तथ्यहरू पढ्नका लागि धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी शुद्धता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाइँ केहि कुरा देख्नुहुन्छ जुन यस लेखमा सही देखिएन, कृपया तपाईंको टिप्पणी राख्नुहोस् वा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् !.